China Angle grinder၊ သက်တင့်စေခြင်း၊ သံတူ၊ Li-ion လေ့ကျင့်ခန်း၊ Boda
၁။ လီသီယမ်ဘက်ထရီအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဒရိုင်ဘာ / ပြန်လည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဒြပ်စင်သည်ဝက်အူ၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်မြေထည်နှင့်ပလတ်စတစ်များအတွင်းနှင့်တွင်းထဲရှိတွင်းတူးရန်သင့်တော်သည်။
2. အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဝက်အူများကိုလှည့်ရန်နှင့်ထွက်ရန်သင့်တော်သည်။ သစ်တုံး၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်မြေထည်နှင့်ပလတ်စတစ်များတွင်လည်းတူးဖော်နိုင်သည်။
၃။ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် wrench သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအတွင်းနှင့်အပြင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအတွင်းအခွံမာသီးများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့်လျှော့ချရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
၄။ ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောလျှပ်စစ်သံတူသည်အုတ်၊ ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်တုံးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများတူးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ သစ်သား၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်မြေထည်နှင့်ပလတ်စတစ်တို့တွင်အပေါက်များကိုတူးဖော်နိုင်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရှေ့သို့ / ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ချက်များတပ်ဆင်ထားသောစက်သည် screws များလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိပုတ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၅။ လျှပ်စစ်လက်ကိုင်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ပလတ်စတစ်၊ ကြွေ၊ သတ္တုနှင့်သစ်သားတို့ပေါ်တွင်တူးရန်သင့်တော်သည်။ လျှပ်စစ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ရှေ့သို့ / ပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတပ်ဆင်ထားသောစက်များသည်ချည်များကိုလှည့်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၆။ Impact Drill သည်အုတ်၊ ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်တုံးများအပေါ်သက်ရောက်မှုတူးရန်သင့်တော်သည်။ သစ်၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်နှင့်ပလတ်စတစ်အပေါက်များကိုလည်းတူးဖော်နိုင်သည်။ အီလက်ထရောနစ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာနှင့်တပ်ဆင်ထားသောပုံစံများသည်ရှေ့သို့ / ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဝက်အူများကိုလျှော့ချ။ ထိပုတ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၇။ Hammer Drill ကိုကွန်ကရစ်၊ အုတ်နံရံများနှင့်ကျောက်တုံးများတုန်ခါမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တုန်ခါမှုတူးဖော်ခြင်းကိုပိတ်ပြီးနောက်စက်ကိုသစ်သား၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပလတ်စတစ်များပေါ်တွင်တွင်းတူးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အီလက်ထရောနစ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော / အနုတ်လက္ခဏာအုတ်ခလုတ်တပ်ဆင်ထားသောစက်သည်ဝက်အူများ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တပ်ဆင်ထားသောစက်သည်အစရှိသည့်စစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၈။ လျှပ်စစ်ရွေးချယ်မှုသည်ကွန်ကရစ်၊ အုတ်နံရံ၊ ကျောက်တုံးနှင့်ကတ္တရာစေးဖြင့်ဖြတ်တောက်ရန်သင့်တော်သည်။ သင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားပါကစက်ကိုဝက်အူများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောပစ္စည်းများကိုလည်းထိပုတ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၉။ ထောင့်ကြိတ်စက်သည်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းရေကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျောက်ကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်လမ်းညွှန်ပြားကိုအသုံးပြုရမည်။ အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုတပ်ဆင်ထားမော်ဒယ်များသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစက်များတွင်သင့်တော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ပါကကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၀။ ပိုလန်စက်သည်သတ္တု၊ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၁။ ဖြောင့်သောကြိတ်ခွဲစက် (emery ဘီးတပ်ဆင်ထားသော) သတ္တုကြိတ်ဆုံနှင့် burr ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ အီလက်ထရောနစ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်စက်တွင်အနိမ့်အရှိန်ဖြင့်စုတ်တံ၊ ပန်ကာပုံစံကြိတ်ဘီးနှင့်ကြိတ်ခါးပတ်များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၂။ လျှပ်စစ်ကားမောင်းသူသည်သစ်သား၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်နှင့်ပလပ်စတစ်ဖြင့် ၀ င်သောအပေါက်များနှင့်အပေါက်များဖောက်ရန်သင့်တော်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
(၁၃) နှိပ်စက်သည်ဖြောင့်မတ်သောအပေါက်ဖောက်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ အထူးဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်မျက်မမြင်အသာပုတ်နိုင်သည်။ ၁၄။ Impact wrench သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအကွာအဝေးအတွင်းရှိ screw နှစ်ခုအား ၀ င် / ထွက်ရန်သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားအကွာအဝေးအတွင်းရှိအခွံမာများကိုပိုမိုတင်းကြပ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
15. သတ္တုလျှပ်စစ်ညှပ်သည်သံပြားကိုဖြတ်ရန်သင့်တော်သည်။ သငျသညျခါးဆစ်နှင့်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၆။ ဖြောင့်ဖြောင့်သောလျှပ်စစ်ညှပ် / လျှပ်စစ်ထိုးနှက်ခြင်းညှပ်သည်သတ္တုပြားကိုဖြတ်တောက်ရန်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းကိုဖြောင့်သောလိုင်းဖြတ်ခြင်း၊ အတွင်းအပေါက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောကွေးသောထောင့်ဖြတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
17. ထောင့်ဖြတ်လွှင့် longitudinal ဖြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် transverse ဖြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၈။ ပရိုဖိုင်းဖြတ်စက်သည်သတ္တုပြားကိုရေမသုံးဘဲဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ဖြတ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၁၉။ ကျောက်တုံးဖြတ်သည့်စက်သည်မြင့်မားသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့) ကို slotting သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ စက်ကိုတည်ငြိမ်သောအလုပ်ခုံပေါ်တွင်လည်ပတ်။ အကာအကွယ်အဖုံးကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အထူးပုံစံတပ်ထားသောစက်များကိုစိုစွတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်နှင့်သတ္တုများကိုခုတ်လှဲရန်ဤစက်အားအသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
20. နံရံ slotting စက်
၎င်းတွင်လမ်းညွှန်လျှောကျကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေအားအသုံးမပြုဘဲ (အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၊ အုတ်နံရံများနှင့်ကတ္တရာခင်းစသည့်ကုန်ကြမ်းများကဲ့သို့သော) သတ္တုများနှင့်ပတ်သက်သော groove groove များကိုဖြတ်တောက်ရန်သို့မဟုတ်ကြိတ်ရန်သင့်တော်သည်။
၂၁။ Curvilinear သည်သစ်သား၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်များနှင့်ရာဘာများကိုအောက်ခံပေါ်တွင်ဖြတ်တောက်ရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်မျဉ်းဖြောင့် (သို့) bevel angle (45 ဒီဂရီထောင့်အထိ) ဖြတ်နိုင်သည်။
၂၂။ တည်ငြိမ်သောအလုပ်လုပ်နိုင်သောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သစ်ခုတ်ရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းကို longitudinal နှင့် transverse straight sawing သို့မဟုတ် diagonal sawing အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Oblique ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်မှု၏အများဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်မှုထောင့်သည် 45 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂၃။ Latex ဖြတ်စက်သည်ဒီစက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂၄။ သဲ၊ ချပ်များ / စက်များသည်သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်၊ ဖြည့်တင်းသူများနှင့်ဆေးသုတ်ထားသောမျက်နှာပြင်များကိုခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ လျှပ်စစ်ညှိနှိုင်းမှုစနစ်ပါသောစက်သည်ပိုလန်ခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂၅။ ပလတ်စတစ်ကိုကွေးခြင်းသို့မဟုတ်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဆေးဟောင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အပူစွမ်းအင်ကျုံ့နိုင်သောပိုက်ကိုလေပူစက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုဂဟေဆော်ခြင်း၊ သံဖြူဖုံးခြင်း၊ ကော်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ရေပိုက်များအရည်ပျော်ခြင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂၆။ Wall detector သည်သတ္တု၊ ဝါယာကြိုး၊ သစ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂၇။ လေဆာရောင်ခြည်အကွာအဝေးသည်အကွာအဝေး၊ areaရိယာနှင့်ပမာဏကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးအမြင့်ကိုသွယ်ဝိုက်တိုင်းတာနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ
၂။ ကြွေပြား၊ ကျောက်၊ သစ်သားနှင့်အုတ်နံရံများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောကျောက်တုံးတုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ (သစ်သားဖြင့်ထောင့်ဖြတ်စက်ပေါ်မှသစ်သားကိုဖြတ်ပြီးဓါးဖြင့်ထိုးခြင်းထက် ပို၍ လုံခြုံသည်)
1.It သည်ခိုင်မာသောမျက်နှာပြင်၊ ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်တုံးများနှင့်ဘက်စုံသုံးလျှပ်စစ်သံတူပေါ်တွင်တူးဖော်ခြင်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ သင့်လျော်သောအနေအထားကိုချိန်ညှိပြီးသင့်လျော်သော drill bit နှင့်တပ်ဆင်သောအခါ၎င်းကိုသာမန်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ရွေးခြင်းအစားသုံးနိုင်သည်။
Electric drill pickaxe - ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုနှင့်ဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည်။ သင်ကတူနှင့်ကန်တစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တူသည်။ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်သည်လက်စွဲစာအုပ်ထက်အဆပေါင်းများစွာပိုမိုများပြားသည်။
2. လျှပ်စစ်ပစ်ကပ်နှင့်လျှပ်စစ်တူများအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာအရွယ်အစားကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအားမြင့်သောလျှပ်စစ်သံတူများသည်ကြီးမားသောတွင်းများကိုတူးဖော်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်တူများဟုခေါ်ကြသည်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်
အဆိုပါသက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းသာမန်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုသာမန်တူးဖော်ခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုတူးဖော်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲနိုင်သောပြောင်းလဲခြင်း over switch တစ်ခုရှိသည်။
12V ၏လျှပ်စစ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၏စွမ်းအားသည် 21V ၏စွမ်းအားနှင့်ကွဲပြားသည်။ 12V ၏ခွန်အားသည် 21V ထက်သေးငယ်သည်။
၁။ လျှပ်စစ်တူးဖော်သည့်ဘက္ထရီ၏ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကိုအဆင့်များစွာခွဲခြားထားသည်။ 12V လေ့ကျင့်ခန်း၏စွမ်းအင်သည် 10C ဖြစ်ပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် 5C ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
၂။ စွမ်းအားသည် output power ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် output 21V ၏ output voltage သည်မြင့်မားသည်။ current သည်အရွယ်အစားကြီးမား။ မရသော်လည်း၎င်းကို voltage ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ဗို့အားကိုခံနိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်သည်။
BOSENDA သည်ပါဝါကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုသုံးစွဲသူများသည်အီးယူ၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ အန္တရာယ်ကင်းသော၊ မီးခံနိုင်သောသံမဏိ၊ လက်ဗွေကုဒ်သော့ခတ်ခြင်း၊
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်တိပ်၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သောတိပ်၊ PVC တိပ်ခွေ၊